မောင်တူး - အကြွေး ငါးသိန်းကိုယ်စီ ပန်းချီကား - MoeMaKa Media
Home / Community / Experience / Maung Di / Maung Too / မောင်တူး - အကြွေး ငါးသိန်းကိုယ်စီ ပန်းချီကား
မောင်တူး - အကြွေး ငါးသိန်းကိုယ်စီ ပန်းချီကား
Community, Experience, Maung Di, Maung Too
(မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀
အသက် ၇၉ နှစ်ရှိ ဆရာကြီး ပန်းချီမောင်ဒီဟာ က လသာ Kalasa ပန်းချီပြခန်းမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်က ၁၀ ရက်ထိ Global Village Art Exhibition ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ၈၀ ပြည့်တော့မဲ့ အနုပညာရှင်ကြီးက ကဗျာလဲရေးတယ်။ ပန်းချီလဲရေးတယ်။ အဲ့သည်မှာ သူ့ကို မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အလှသစ်ပန်းချီပြခန်းမှာလဲ ၂၀၂၀ ပြည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကနေ ၁၈ တိုင် Colour Poetry ကဗျာနဲ့ ပန်းချီ စုစည်းမှု Poet’s Art-2020 စုပေါင်း အနုပညာပြပွဲမှာ သူ့ကဗျာပန်းချီကားတွေ ပါဝင် ပြသခဲ့တယ်။ ဝုန်းဒိုင်းကျဲလိုက်ပုံက ပန်းချီကားရေးအပြီး ဒီပန်းချီကားချပ်အပြည့် ကဗျာတွေရေး ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေ မပြောခင် ကွယ်လွန်သူ နာမည်ကျော် အဆိုတော်ခင်ဝမ်းရဲ့ အိုမောင်ဒီ သီချင်းလေးကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
အို မောင်ဒီ (ရေး/ဆို- ခင်ဝမ်း)
အို မောင်ဒီ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် လမ်းကြိုလမ်းကြား လျှောက်သွားခဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ သတိရမိတယ်။
မြင်ခဲ့ရသမျှ လောကရဲ့အလှအပ ခင်ဗျား ထွင်းဖောက်ယူခဲ့ပုံ။
အို မောင်ဒီ ခင်ဗျားနဲ့ကျနော် လမ်းဘေးက ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်ခဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ အမှတ်ရမိတယ်။
လူတယောက်ရဲ့ ဘဝ ဖြတ်သန်း နိုင်သမျှ ခင်ဗျား ရယူခဲ့တာ။
အို မောင်ဒီ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် လောကထဲကို ဖြတ်သန်းခဲ့ တုန်းက အကြောင်းတွေ လွမ်း ဆွတ်မိတယ်။
တွေ့ကြုံခဲ့ရ ခံစားခဲ့ကြ ခင်ဗျား စိတ်တည်ငြိမ်ခဲ့ပုံ။
ဒါကတော့ တေးရေး တေးဆို ကျနော်တို့သိပ်ကြိုက်တဲ့ ခင်ဝမ်း ရေး ဆို အိုမောင်ဒီ သီချင်းပေါ့။ ခင်ဝမ်း လေးစားတဲ့ မောင်ဒီကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းအပြီးမှာ ကျနော်လဲ ပန်းချီမောင်ဒီကို အရမ်း ကြွေသွားပါ့ရဲ့။ သူက စကားတွေ ဒဿနတွေ သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေ အရှည်ကြီး အကြာကြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပန်းချီမောင်ဒီ ပထမဦးဆုံး စ ပြောတာကတော့။
(အတွေးအခေါ်တွေ မပြောင်းရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံက ဘယ်လိုမှ မတိုးတက်ဘူး။ အဲ့သည်အတွက် အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလည်းသွားအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အဲ့သည်အတွက် ကျနော် မောင်ဒီက မော်ဒန်ပန်းချီ ပြပွဲကို လုပ်တာပါ။)
ဒါက Kalasa ကလသာ ပြခန်းမှာ မတ်လက ပြောခဲ့တာပါ။ သူ့ပန်းချီပြပွဲတွေက အတွေးအခေါ်တွေကို ဘယ်လို ပြောင်းလည်းစေသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ပန်းချီကားတွေကို လိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ‘ ဇီဝကလို သမားတော် အလိုရှိသည်’ အမည်ရှိ ကဗျာ ပန်းချီကားမှာတော့ စဉ်းစားစရာကလေးတွေ တွေ့လာပါတယ်။
‘ ဇီဝကလို သမားတော်တွေ အလိုရှိသည် ’
ငါတို့၏ နိုင်ငံမှာလည်း ကျန်းမာလာလျှင်
မကြာမီပင် ကျန်းမာသည့် လက္ခဏာများ
အသပြာ ဆရာဝန်တွေနှင့်ကလည်း မဖြစ်
ဇီဝကလို သမားတော်တွေ လိုအပ်နေသည်သာ။
မောင်ဒီ ၂ . ၂ . ၂၀၂၀
ပန်းချီကားတွေဟာ စကားပြောကြသတဲ့။ ဟားတိုက်ရယ်ကြသတဲ့။ ငိုယိုကြသတဲ့။ သမိုင်းကို ဖော်ပြကြတယ်တဲ့။ ဆောင်းပါးရေးသူကလဲ သူဖြစ်လိုတဲ့ဟာကို ဆောင်းပါးမှာထည့်ရေးကြတာပါ။ ဥပမာ လူတွေ ရွေးကောက်ပွဲကို မပျက်မကွက် မဲသွားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းရေးသားတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ။ တချို့ပန်းချီဆရာတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ရေးမယ်။ ပန်းချီဆရာမတွေ ဆွဲရင်တော့ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အလားတူ အထက်က ပန်းချီမောင်ဒီရဲ့ ဇီဝကလို သမားတော် အလိုရှိသည် ကဗျာ ပန်းချီကားမှာတော့ စဉ်းစားစရာ ကလေးတွေ တွေ့လာပါတယ်။ ပန်းချီကားချပ်မှာ သူ့အတွေးအခေါ်ကို ရေးခဲ့တော့ ကြည့်သူတွေ ကြည့်ပြီး အတွေးတွေ အသစ်တွေ ရသွားတာပေါ့။ နောက် ပန်းချီတချပ်ကိုလဲ ရှု့ပါဦး။ ‘အောင်ပွဲ’တဲ့။ အနိုင်ယူခြင်းလည်း မဟုတ်။ အရှုံးပေးခြင်းလည်း မဟုတ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့။ ချိုးဖြူငှက်ကလေး သံလွင်ခက်ကိုက်လို့။ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်ကို ပြန်ကြား မြင်လာရတယ်။ နှစ်ဖက် စစ်မက်ပြုတိုက်ခိုက်နေသူများ အတွက် တွေးစရာပေါ့ဗျာ။ စစ်ပွဲရပ်ဖို့ ပန်းချီကားက အော်နေတယ်။
‘ အောင်ပွဲ ’
အကြွင်းက သုညာသာ။ ။
နောက် တကားကတော့ အကြွေး သိန်း ၅၀ စီ ရှိနေတဲ့ ပန်းချီကားပါ။
အကြွေးပြန့်တယ်၊ သိန်း ၅၀ စီ၊
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က၊ တာဝန်ကျပြီး စီမံခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုး ပန်းချီက ပြောပြထားပါတယ်။ ပန်းချီကားနာမည်က ‘ တာဝန်’ ပါ။
‘ တာဝန် ’
ယခင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က
အကြွေး ငါးသိန်း ကိုယ်စီ ရှိနေကြသည်ဟု သိရသည်။ ။
ပန်းချီပြခန်းတွေ သွားပြီး ပန်းချီတကားကို ကြည့်ရှု့ခံစားကြရတယ်။ ကဗျာတပုဒ်ကို ဖတ်ပြီး ခံစား အတွေးပွားကြတယ်။ တခုစီပေါ့။ ပန်းချီမောင်ဒီကတော့ ပန်းချီပေါ်တွင်၊ ကဗျာတင်ရေးထားလို့ နှစ်ဆများ အတွေးပွားကြရ လေမလားပဲနော်။ မောင်ဒီ ပန်းချီ ရဲ့ ကဗျာပန်းချီ ၃ ချပ် အတွေးအခေါ် ၃ မျိုး ကြည့်သူတွေ အသိတိုး ပြောင်းစေမည်လား။ ယခင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် မွေးကင်းစကစ လူတိုင်း ကြွေး ၅ သိန်း ကိုယ်စီရှိနေကြဆဲကိုပဲ စဉ်းစားနေကြမလား။ ပန်းချီထဲက အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ပြည်သူတွေထံ ရောက်ပါစေသားဗျာ။ ။
မောင်တူး - အကြွေး ငါးသိန်းကိုယ်စီ ပန်းချီကား Reviewed by MoeMaKa on 10:23 AM Rating: 5